Goobaha Dalxiiska ee Sandals® ayaa u Dabaaldegaya 40 Sano iyaga oo dib u celinaya Saacadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Goobaha Dalxiiska ee Sandals® ayaa u Dabaaldegaya 40 Sano iyaga oo dib u celinaya Saacadda
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • kariska • dhaqanka • Curacao Breaking News • Entertainment • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Aroosyada Jaceylka Malabka • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Kabaha Sanad Guurada 40aad
Sandals Resorts waxay sii wadaysaa dabaaldeggeedii 40-aad ee sannad-guurada iyada oo iibin gaar ah oo 40-maalmood ah lagu dooranayo Sandals Resorts oo ay ku jiraan hantida calanka leh, Sandals Montego Bay. Lammaanaha oo ballansanaya joogitaanka toddobo habeen ama ka badan safarka waqti kasta inta u dhexeysa Luulyo 31 iyo Oktoobar 2, 2022, waxay furi doonaan qol gaar ah oo kaliya $ 200 qofkiiba, habeen kasta meelaha loo dalxiis tago.
Waxay la mid tahay ku noqoshada 80 -meeyadii iyadoo Sandals Resorts ay u dabbaaldegeyso 4 sano oo warshadaha ah.
Heerka dabbaaldeggaan gaarka ah wuxuu ka dhici doonaa dhammaan Goobaha Sandals -ka, laga bilaabo Jamaica illaa Bahamas, Saint Lucia, iyo Curacao, iyo in ka badan.
Waxaa jiri doona 1981 xaflado dabbaaldeg ah oo la waxyooday, cocktails-gacmeedyo, khadkii dharka guridda, iyo dib-u-malaynta cuntooyinka baarka dabaasha.
“Iibintan aan caadiga ahayn waxay lahaan doontaa la -taliyayaasha socdaalka iyo Sandals Loyalty Martida oo u malaynaya inay tahay '80 -meeyadii mar kale,' 'ayuu yiri Gary Sadler, Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta Iibka & Xiriirka Warshadaha ee Fasaxyada Gaarka ah Inc., oo ka tirsan wakiilada adduunka Caalami ah.
Iibka Sandals Resorts 40-Day Anniversary Sale wuxuu u furan yahay ballansashada afartan maalmood ilaa Noofambar 23, 2021, waxaana laga heli karaa Sandals Montego Bay iyo Sandals Ochi Beach Resort ee Jamaica iyo Sandals Halcyon Beach Resort ee St. Lucia.
Kabaha 40th Dabaaldegyada sannad -guurada ayaa ka dhici doona dhammaan Xarumaha Sandals -ka. Martidu waxay ku dhufan karaan gadaal oo waxay la kulmi karaan madadaalo nostalgic ah '81 xafladaha barkadda ee dhiirrigelinta leh, khad dhar cusub oo gurracan ah, dib-u-habeyn lagu sameeyay baararka dabaasha, cocktails-gacmeedyo cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Martidu waxay sidoo kale awoodi doontaa inay ku biirto Sandals Foundation oo caawiso isbeddel ku samee bulshooyinka Kariibiyaanka ee maxalliga ah iyada oo loo marayo 40 cusub oo loogu talagalay 40 Initiative oo 40 mashruuc oo dheeraad ah u keeni doonta jaaliyadaha degaanka ee jasiirad kasta.
In dib loogu celiyo halkii ay wax walba ka bilaabmeen Sandals Montego Bay, martidu waxay la kulmi karaan qaar ka mid ah astaamaha astaanta u ah astaanta oo ay ku jiraan Swim-Up Suites, baararka biyaha ka sarreeya, Kaniisadaha Arooska ee Biyaha ka sarreeya iyo qaar kaloo badan.
Lammaanaha doorta inay ku nastaan ​​Sandals Ochi, oo ku taal xeebta waqooyi ee Jamaica, waxay ku raaxeysan karaan khidmadaha cagaaran ee bilaashka ah waxayna u wareejinayaan Sandals Golf iyo Club Country oo ay weheliyaan 16 kala-doorasho oo kala duwan oo 5-Star Global Gourmet options ah. Martida ee Sandals Halcyon Beach Resort naftooda ku quusin karaan nasashada guud ee St. Lucia oo ka soo dabaali karaan qolkooda si toos ah baarka dabaasha ee dabbaasha ee caanka ah. Mar kasta oo martida dalxiisku doortaan inay ballansadaan “40th Qolka Sannad -guurada Gaarka ah ”, waxay qayb ka noqon doonaan dabaaldegga 40 sano oo jacayl iyo kalsooni ah.
Shuruudaha iyo xayiraadaha kale ayaa khuseeya. Si aad u ballansato 40th Iibinta Sannad -guurada ee xulashada Sandals Resorts, fadlan booqo sandals.com. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sida Sandals Resorts ay ugu dabaaldegeyso 40keedath Sannad -guurada, hubi inaad booqato kabaha sandal.com/cibinta 40- sano.